कसरी shawarma बनाउन घरमा? कहिल्यै पूर्व यो पकवान प्रयास गरेको छ जो कोहीले आफ्नो अवकाश मा यो प्रश्न सोधे। निस्सन्देह, तयार छ जो मध्य एशिया बाट आएका shawarma, रूसी बजार मा gastarbeiters, रेलवे स्टेशन र वर्गहरूको, शायद वर्तमान सकिन्छ छन्। तथापि, तिनीहरूले कहिलेकाहीं धेरै स्वादिष्ट र सन्तोषजनक प्राप्त। यो पकवान Lavash, कटा मासु संग भरी छ जो, थुप्रै देशहरूमा लोकप्रिय। त्यसैले, यदि तपाईं प्रश्न, द्वारा सास्ती दिइन्छ कसरी shawarma बनाउन घरमा, र यो सम्भव छ भने, यो लेख पूरा मा प्रतिक्रिया हुनेछ।
त्यसैले तपाईंलाई पूर्व र उत्कृष्ट व्यञ्जन दुनिया प्रविष्ट गर्न आवश्यक हुनेछ सामाग्री के हुन्? पहिलो र मुख्य, को पाठ्यक्रम, मासु। यो पाठो, कुखुरा प्रयोग गर्न सम्भव छ देखि यो संघटक, विवादास्पद छ, तर यो पोर्क लागि रोज्न गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। हुनत भविष्यमा तपाईं पाक प्रयोग बाहिर काम गर्न इच्छा रोक्न हुँदैन। Shawarma चिकन पनि धेरै स्वादिष्ट बाहिर आउँछ। पनि गाजर, ककडी, टमाटर, मेयोनेज, केचप, प्याज तपाईं आवश्यक हुनेछ। को बन्दागोभी, भूल छैन जो shawarma गर्मी ताजगी र मसला व्यञ्जन को आरोप मा डिल हुनेछ।
तपाईं कसरी पहिलो चरणमा, shawarma बनाउन बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ भने, सबै तरकारी SHINKI: खीरे - पातलो स्ट्रिप्स, टमाटर - साथै, त्यसपछि तिनीहरूले छुट्टै कचौरा मा राख्नु र मिश्रण गर्नुपर्छ। गोभी कटौती र अर्को कन्टेनर मा राख्नु पर्छ। एक कचौरा मा प्याज र डिल र स्थान काट्नु। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, पहिलो चरण लामो लिन छैन।
कसरी घर मा shawarma बनाउने? मुख्य घटक (मासु) एक पैन मा सानो टुक्रा र भुट्नु मा कटौती गर्नुपर्छ। प्रक्रिया, यो पनि नुन लायक छ र यो कोमल दिन खीरे देखि नुनीन खन्याउन। अब यसलाई कसरी अन्तिम चरण मा shawarma बनाउन सिक्न समय। मासु एक सानो कोरियाली गाजर, साग, र त्यसपछि - तालिका विस्तार गर्नुपर्छ मा द्वारा पूछे जाने रोटी, मेयोनेज संग धब्बा, त्यसपछि यसलाई ककडी र टमाटर मिश्रण केही spoonfuls संग, माथि त। को बन्दागोभी भूल छैन। यो सबै एक ट्यूब मा मेयोनेज र मसालेदार केचप भरिएको र रोल्ड छ। परिणामस्वरूप Shawarma हल्कासित त्यहाँ स्वीकार गर्न सकिने छ र राम्रो तरिकाले हुनत, एक कराइ मा तलना गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै Housewives एक हट ओवन वा माइक्रोवेव केही मिनेट लागि समाप्त पकवान राख्न रुचाउँछु।
प्रश्न छ, कसरी चटनी बनाउन पनि छैन महत्त्व बिना shawarma लागि। आखिर, बस प्रयोग मेयोनेज र केचप - यो trite र धेरै स्वादिष्ट छ। यहाँ लसुन सस लागि ठूलो नुस्खा छ। तर, दही र बाक्लो मेयोनेज चार चमचा, लसुन, रातो र कालो मरिच, तरकारी र धनिया7लौंग लिनुहोस्। लसुन उहाँलाई सबै शेष सामाग्री राख्नु र राम्ररी मिश्रण राम्रो grater मा rubbed गर्नुपर्छ। चटनी एक घण्टा Infuse गर्नुपर्छ।
र यहाँ कसरी छुट्टी निर्णय मा, घर मा shawarma बनाउन को प्रश्नको जवाफ अनुवाद गर्न मदत गर्नेछ जो सस, अर्को रोचक संस्करण हो। स्वाद साधारण नुन को दुई चमचा, दुई कच्चा अन्डा, पहिले साफ गरिएको छ जो लसुन को एक मुट्ठी, जमीन मरिच लिनुहोस्। यो सबै एक ब्लेंडर मा राख्नु र राम्ररी whisk हुनुपर्छ। मिश्रण homogeneous देखिन्छ पछि, यो सूर्यमुखी तेल को एक चमचा खन्याउन आवश्यक छ। र यो बिस्तारै गर्नुपर्छ trickle।
चटनी साथै तपाईं अझै पनि आफ्नो हात र Kebabs लागि द्वारा पूछे जाने रोटी गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै मानिसहरू स्वतन्त्र पकाउने तिनीहरूलाई तयार-गरे, तर धेरै रोचक किन्न रुचाउँछु। तपाईं पीठो को आधा किलो, पानी को 250 ग्राम, खमीर (8 G) र नुन एक झोला आवश्यक हुनेछ। धेरै व्यञ्जनहरु मा lavash पनि यस्तो घिउ, अन्डा र अन्य रूपमा सामाग्री पाइन्छ। कुनै पनि मामला मा, यो कुनै ठूलो सम्झौता छ।
कसरी घर मा shawarma बनाउने? सजिलो र सरल। यदि तपाईं प्रयास गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईं एक मोड संग एक, स्वादिष्ट flavorful हो, सन्तोषजनक र मसालेदार shawarma छ छौँ।
अनाज संग सूप - द्रुत नुस्खा!
एक प्रोभेन्कल मा पाठो को र्याक। सिफारिसहरू र नुस्खा
राजा prawns: व्यञ्जनहरु
मूल fillings गर्न परम्परागत क्लासिक देखि ravioli लागि भराई
Hotel Pyli Bay3*, कोस: समीक्षाहरु। ग्रीस मा छुट्टियों को कोस द्वीप मा छुट्टियाँ
बस दबाइ "Izoket" बारे: विरामीहरु लागि प्रयोगको लागि निर्देशन
कसरी दही र फल को मद्दतले वजन गर्न
दबाइ "Bromkamfora": समीक्षा, निर्देशन
अप्रिल 12 - इतिहास परिवर्तन गर्ने दिन
एउटा नाम के हो? सुविधा नाम दिमित्री
फाइबर आहार - प्रयोग के हो?